Qaylada Beesha Caalamka Ee Dilkii Saxafi Jamal Khashoggi Oo Isu Baxday Iyo Warbixin Halka Wax Marayaan. – somalilandtoday.com
Qaylada Beesha Caalamka Ee Dilkii Saxafi Jamal Khashoggi Oo Isu Baxday Iyo Warbixin Halka Wax Marayaan.
(SLT-London)Dalalka Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Sacuudi Carabiya ugu baaqay inuu sharraxaad degdeg ah uu ka bixiyo dhimashada Jamal Khashoggi.
Faahfaahintii Sacuudiga ee dilkii Jamal Khashoggi oo la qaadan la’yahay
Jamaal Khashoggi: Suxufi Sacuudiga u dhashay oo lagu la’ yahay Istanbul
Wuxuuna Mr Jubeir uu intaasi ku daray “Iney shaqsiyaadkaasi ay sameeyeen wax aysan awood u lahayn. Runtii khalad aad u weyn ayaa dhacay waxaana khaladka dhacay aad u sii weyneeyey iskudayga in la qariyo falka dilka ee foosha xun”
Waxaanna dooneynaa ayuu yiri: “inaan xaqiijinno shaqsiyaadki falkaasi ka dambeeyey, ciqaabta ku habboonna la mariyo.”
“Balse ma ogin halka meydka Khashoggi ay geeyeen” ayuu yiri.
Mar sii horreysay Sacuudi Carabiya waxay sheegtay Ilaa iyo hadda Sacuudi Carabiya waxay sheegtay in ay xabsiga dhigtay 18 qof, ayna shaqadii ka eriday laba nin oo gacan yare u ahaa Dhaxal Sugaha dalkaas Mohammed bin Salman, ayna isbaddal ku samaysay hay’adda sirdoonka.
Haa, tiro badan oo dalalka dariska la ah ayuu taageero ka haystaa.
Kuwait ayaa ah dalkii ugu dambeeyey ee ammaanay sida Boqor Salmaan uu uga jawaabay kiiska, iyadoo sheegtay in taasi ay muujinayso ” Dadaalka Boqortooyada iyo ka go’naanshaha in ay runta sheegto iyo tixgalinteeda sharciga oo ay doonayso in ay la xisaabtanto kuwii ka dambeeyey dhacdadan murugada leh”
Masar, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa kamid ah dalalka jeediyey ammaan taas lamid ah.
Xaggee marayaa baadhitaankii hadda?
Turkiga ayaa Sabtidii sheegay in uu soo bandhigi doono dhammaan caddaymaha uu hayo oo aanu waxba qarin doonin.
Turkigu wuxuu yara joojiyey eedayntii tooska ahayd ee uu Sacuudiga ku eedaynayey dilka, balse baarayaasha kiiska ayaa sheegay in ay hayaan caddaymo isugu jira cod iyo muqaal muujinaya in Mr Khashoggi ay qunsuliyadda ku dhex dileen koox katirsan sirdoonka Sacuudiga.
Booliiska ayaa ka baadi goobaya kaynta Belgrad oo aaggaas kadhow kuna dhextaal Istanbul halkaas oo ay rumaysan yihiin in maydkii loo qaaday ayadoo mid kamid ah saraakiisha baadhitaanka wada uu ku rajo wayn yahay in goor aan dheerayn la ogaan doonoo halka uu ku dambeeyey.
Dhismaha qunsuliyadda iyo hooyga qunsulka ayaa sidoo kale laga baaray.
Hadalka Sacuudiga ayaa is badbaddalay dhowr jeer, markii hore wuxuu sheegay in Mr Khashoggi uu ku dhintay ciijin kadib markii uu iska caabiyey iskuday lagu doonayey in dalkiisii Sacuudi carabiya lagu celiyo. Wuxuu kaloo sheegay in maydkiisii roog lagu duubay oo loo dhiibay caawiye dalka Turkiga u dhashay, si uu u soo aaso.
Kadib waxaa soo baxday warar sheegaya in qof dharkii Mr Khashoggi xirtay oo asaga isu ekaysiiyey uu qunsuliyadda ka baxay.
Masuul sacuudi ah ayaa sheegay in hadallada sacuudigu ay isu baddaleen sababo la xiriira ” Xog been ah oo xilligaas ka soo gaartay gudaha.”